Ville निःशुल्क चीजहरू सेभिलमा हेर्नका लागि यात्रा समाचार
कारमेन गुइलन | | स्पेन शहरहरू, संस्कृति, sevilla
sevillaपवित्र हप्ताको यी विशेष दिनमा यो स्पेनको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहरहरू मध्ये एक बन्न पुग्छ किनभने उनीहरूले यसको प्रत्येक नक्सालाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक हेरचाह गर्छन् कि उनीहरूले यसका सडकहरूमा नासरीहरू, एर्रो र धूपको बीचमा प्रक्रिया गर्छन्।
यदि तपाईं ती व्यक्तिहरू मध्ये हुनुहुन्छ जो यी दिनहरू वा धेरै चाँडै सेभिलको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको छ भने, सायद तपाईंलाई राम्रो लाग्छ यो तपाईंलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। Ville सित्तै चीजहरू सेभिलमा हेर्नका लागि. निःशुल्क सधैं काम गर्दछ, र विशेष गरी व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछ, त्यसैले पछाडि नहुनुहोस् र यी सबै ठाउँहरूको टोपीमा रमाउनुहोस्।
1 Torre del Oro मा हेर्नुहोस्
2 इन्डियसको अभिलेख
3 सेभिलको वास्तविक अल्काजार
4 ला Giralda
5 म्यूजियो डे बेलास आर्ट्स
6 कार्टुजा मठ
7 मोरोक्कोको मंडप
Torre del Oro मा हेर्नुहोस्
La सुनको टावर यो सेभिल शहरको सबैभन्दा सम्मानित र विशेषता साइटहरू मध्ये एक हो ... यो एक Torre अल्बेराना हो, १० मिटर अग्लो गुआदाल्किभिर नदीको बाँया किनारमा अवस्थित छ। पृष्ठभूमिमा यो सुन्दर स्मारकको साथ सेभिलको पोस्टकार्ड वा फोटोहरू हेर्न सामान्य र धेरै सामान्य छ। त्यसोभए यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ यसलाई नि: शुल्क देख्नको लागि हो भने, तपाइँलेaबाट रोक्नुपर्नेछ चन्द्रमाहरू। हो, तपाईंले पढ्नु भएको छ, प्रत्येक सोमबार, टोरे डेल ओरो भ्रमण गर्न कुनै लागत छैन।
यदि तपाईं यसमा जानुभयो भने, तपाईं माथिबाट नदी र शहरको भिन्न परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं कुनै दिन जानुभयो भने, प्रवेशकर्ताको लागि प्रति व्यक्ति ur यूरोको लागत छ, वरिष्ठ र मान्यता प्राप्त विद्यार्थीहरूको लागि १ यूरो।
Su भ्रमण गर्ने समय निम्न छ:
De सोमबारदेखि शुक्रवार: १०:०० - १:10:०० घण्टा।
शनिबार र आइतवार: १०:०० - १:11:०० घण्टा।
अगस्तमा बन्द छ।
मा अवस्थित ट्राइम्फ स्क्वायर, इन्डियनको अभिलेख, १1785 मा निर्मित कार्लोस III को शासनकालमा, यो पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। यो विशाल भवनले स्पानिश प्रशासनले निर्माण गरेको संस्था र स्प्यानिश विदेशी टेरिटोरीहरू द्वारा निर्मित रकमको रक्षा गर्दछ। स्ग्रहले पुरानो स्पेनिश उपनिवेशहरूबाट लगभग ,43.000 XNUMX,००० लिगेसी सुरक्षित गर्दछ।
El भ्रमण गर्ने समय निम्न छ:
सोमबारदेखि शनिबार: बिहान :9: to० देखि :30::16 p बिहान
आइतवार र छुट्टिहरु: बिहान १०:०० बजे देखि बिहान २:०० बजे
सेभिलको वास्तविक अल्काजार
Es संसारमा प्रयोग गर्नको लागि सब भन्दा पुरानो दरबारहरू मध्ये एक। सेभिलको वास्तविक Alcázar समय मा विभिन्न चरणहरु मा बाँचिरहेको छ, ११ औं शताब्दीको अन्तदेखि अहिलेसम्म। यसको पर्खालबाट, यसले सेभिलमा अहिलेसम्म बसोबास गर्ने विभिन्न संस्कृतिहरूको प्रभावको बारेमा चिन्तन गरेको छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने नि: शुल्कको लागि हेर्नुहोस् यो विशाल दरबार, तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन्:
सेभिलका मूल निवासी हुनुहोस् वा शहरमा बस्नुहोस्।
सोमबार दिउँसो तिनीहरूलाई भेट्न.
अन्डालूसियन राजधानीको अर्को भवन! ला Giralda सान्ता मारिया कैथेड्रल को घण्टा टावर गर्न दिइएको नाम छ। टावरको तल्लो दुई तिहाइ भाग १२ औं शताब्दीको अन्तदेखि शहरको पुरानो मस्जिदको मीनारमा मिल्छ। अल्मोहद अवधिमाजब कि माथिल्लो तेस्रो तेस्रा समाप्त हुन्छ जुन इसाई समयमा घण्टीहरू राख्नको लागि पहिले नै थपेको छ।
यदि तपाइँ ला Giralda भ्रमण आइतवारहरूमा तपाईको प्रवेश पूर्णतया सित्तैमा हुन्छ। यदि तपाइँ अरू कुनै दिन गर्नुहुन्छ भने यसको लागतeयूरो छ।
Su भ्रमण गर्ने समय es:
वसन्त गर्मी: सोमबारदेखि शनिबार ० :09: to० देखि १:30: .० सम्म। आइतवार २::16० बिहान 30:०० बिहान
शरद Winterतु जाडो: सोमबारदेखि शनिबार बिहान ११:०० बिहान 11:०० बिहान आइतवार यो बिहान २::00० देखि :18:०० बिहान सम्म हुन्छ।
यो भवन प्लाजा डेल म्यूजिओमा अवस्थित छ युरोपेली नागरिकहरूको लागि निःशुल्क प्रवेश। तैपनि, प्रवेश लागत महँगो छैन, किनकि यसको लागत १.eयूरो मात्र छ।
यो बारेमा छ Andalusia मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कला संग्रहालय र दोस्रो सब भन्दा महत्वपूर्ण स्पेनमा छ किनकि यो महान राष्ट्रिय कलाकारहरु द्वारा चित्रहरु को एक ठूलो संग्रह छ।
यसको निर्माण १ 1835 मा अन्त्य भयो तर यो थिएन १ officially1841१ सम्म आधिकारिक रूपमा खोलियो। यो भ्रमण गर्न लगभग एक अनिवार्य संग्रहालय हो यदि तपाईं सेभिलियन बारोक पेंटिंग, विशेष गरी जुर्बर्न, मुरिलो र भल्डेस लील, साथै १ th औं शताब्दीको अन्डालुसियन चित्रका बारे जान्न चाहानुहुन्छ भने।
Su अनुसूची निम्न छ:
सोमबार बन्द छ
मंगलबारदेखि शनिबार बिहान :9: ०० देखि to::00० बिहान
आइतवार र छुट्टिहरु: बिहान :9: ०० देखि २::00० बिहान सम्म।
लाई पनि भनिन्छ समकालीन कला को लागी Andalusian केन्द्र (CAAC)। यो १ 1990 XNUMX ० मा सबै Andalusia को लागी एक उचित संस्थाको साथ प्रदान गर्ने इरादेका साथ सिर्जना गरिएको हो अनुसन्धान, संरक्षण, पदोन्नति र समकालीन कलाको प्रचार।
बिस्तारै, कलाका कामहरू समकालीन स्थायी संग्रहको कन्फिगरेसनको पहिलो चरणहरू लिने विचारको साथ अधिग्रहण गर्न शुरू भयो।
यस मठमा प्रवेश कला केन्द्रमा परिणत भएको छ मंगलबार देखि शुक्रवार सम्म नि: शुल्क (को समयमा दिउँसो), र शनिवार सबै दिन.
El भवन थियो मोरक्कोको राज्य द्वारा ceded भूमध्यसागरका तीन संस्कृतिहरूको जगको लागि, येटेरियरको वैभव संरक्षण गर्दै।
La भ्रमण निर्देशन गरिएको छ र यसको अवधि एक घण्टा हो, पूर्ण रूपमा नि: शुल्क, हो, तपाईंले गर्नु पर्छ अधिकतम people० व्यक्तिको समूहहरू मिलाउन गाइडका लागि अग्रिम बुक गर्नुहोस्।
सेभिलको अद्भुत शहरमा यी अविनाशी ठाउँहरूको भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईं मोहित हुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » संस्कृति » Ville सित्तै चीजहरू सेभिलमा हेर्नका लागि
उदाहरण को लागी, अर्को नि: शुल्क साइट जुन यात्रीले सेभिलमा बेवास्ता गर्नु हुँदैन त्यो हो प्लाजा डे एस्पाना। मुख्य भवन, १ 1929 २ from प्रदर्शनीबाट, क्षेत्रीय आर्किटेक्ट अनबल गोन्जालेज द्वारा।
दक्षिण अमेरिका फल्स: प्रभावशाली झरना